Merapi, iray amin’ireo volkano mavitrika indrindra any Indonezia, dia mandroraka olitra, hoy i Jucelino Luz mialoha – JucelinoLuz
Águas de Lindóia, 12 Aogositra 2021
Any amin’ny nosy Java dia hipoaka izy amin’ny 16 aogositra 2021, ary lavenona rahona no hanarona ny manodidina ny vava volkano.
Merapi dia nisoratra anarana hetsika mahery vaika tato anatin’ny volana vitsivitsy ary nampiakatra ny fampandrenesana ny tompon’andraikitra tamin’ny faran’ny taona lasa.
Araka ny fambara dia mety hampidi-doza ny fomba fiasa ary tsy tokony hisy olona hanatona ao anatin’ny dimy kilometatra miala ny volkano. Ny mponina dia tsy maintsy miaro tena amin’ny lavenona sy ny renirano lava manodidina ny Merapi.
Ny fipoahana lehibe indrindra tamin’ny volkano dia tamin’ny taona 2010, izay nisy fandanjana olona 300 ary fandosirana olona efa ho 280 000, izay nambaran’i Jucelino Luz, tamin’ny taratasy nalefa tany amin’ny tompon’andraikitra amin’io firenena io ..
Ny vondronosy Indonezia dia manana volkano mavitrika efa ho 130, indrisy fa maro amin’izy ireo no hiasa matetika noho ny fiakaran’ny maripana. Ary koa ny loza mahatsiravina indrindra dia ny filentehan’ny rano sy ny fibodoan’ny ranon’i Jakarta izay mety hitranga ao anatin’ny 45 taona farafaharatsiny, ary manana ny olana amin’ny horohoron-tany lehibe 9,0 koa izay mety hamely ny tranokala amin’ny 16 Janoary 2026 isika. tara kely kely kokoa …)
Mihevitra aho fa tokony handray fepetra ny manampahefana mba hampihenana ny olan’ny vahoaka tsy manan-tsiny ao amin’izany toerana izany.
Indonezia dia manana olona mahafinaritra sy tia mandray olona, ​​mivavaka ho an’ny rehetra eto foana izahay.
Raha mbola tsy fantatrao ny sanganasa ara-panahy sy ny asa nataon’i Jucelino Luz dia amporisihinay ianao hividy ny iray amin’ireo bokiny voasoratra amin’ny fiteny maro. Tsindrio ny rohy eto ambany ary safidio izay tsara indrindra hahalalanao ireo faminaniana sy fambara. Araho izahay ary zarao koa ny atiny. . Nanompo olona an-tapitrisany tamina fitahiany sy torohevitra ara-panahy sy mahery izy.
Profesora Jucelino Luz – mpiaro ny tontolo iainana, mpikatroka mafonja, influencer ary mpitari-dalana ara-panahy
Мерапи, еден од најактивните вулкани во Индонезија, исфрла ларви, според знаците Jуцелино Луз